IVD akụrụngwa Suppliers na Factory |Ndị na-emepụta akụrụngwa nke China IVD
◮Maka nkwalite RNA ozugbo sitere na mkpokọta swab na-enweghị usoro ịdị ọcha RNA.Ngwa a na-emecha okirikiri qRT-PCR n'ime otu elekere.Ngwakọta enzyme bụ ngwakọta kachasị nke Reverse Transcriptase, Hot-Start Taq DNA polymerase, RNase inhibitor.Ihe nchekwa mmeghachi omume nwere akụrụngwa niile achọrọ, gụnyere akụrụngwa nchekwa kachasị, Mg2+, dUTP, na dNTPs.
Foreasy M-MLV Reverse Transcriptase bụ transcriptase ọhụrụ reverse egosipụtara na nje bacteria E. coli mebere site na iji teknụzụ nchikota mkpụrụ ndụ ihe nketa.Ọ bụ polymerase DNA recombinant nke na-emepụta eriri DNA na-akwado ya site na RNA, DNA, ma ọ bụ RNA: DNA ngwakọ.Ọ nweghị ọrụ RNase H, nkwụsi ike siri ike, njikọ RNA siri ike, yana nghọta dị elu.
Onye na-egbochi RNase nke na-ahụ anya
◮RNase inhibitor nke òké ewepụtara ọhụrụ gosipụtara na nje bacteria E. coli mebere site na iji teknụzụ recombination gene.Onye na-egbochi ihe na-egbochi ọrụ RNase site na ijikọghị asọmpi na RNase 1: 1, si otú a na-echebe.RNAiguzosi ike n'ezi ihe , ma nwee ike igbochi nke ọmankeRNase A, B, C ọrụ , ma ọ bụghị RNase T1, T2, H, wdg; Ọ bụ reversible nke njide nke RNase Inhibitor na RNase , na mgbagwoju nwere ike kewapụ site urea na sulfhydryl reagents, nke mere na RNase renatures na inhibitor bụ irreversibly inactivated.
Ihe omuma nke DNA Polymerase
◮Nkọwa dị elu: Enzyme nwere ụfọdụ ọrụ mmalite na-ekpo ọkụ.
◮Nkwalite ngwa ngwa: 10 sk/kb.
◮Ndebiri nwere ike imeghari nke ukwuu: enwere ike iji rụọ ọrụ nke oma nke ọma GC Uru dị elu, ụdị DNA dị iche iche siri ike ịkwalite.
◮Ikwesị ntụkwasị obi siri ike: Taq Enzyme nkịtị ugboro 6.
◮Nkwụsi ike okpomọkụ siri ike: Enwere ike itinye ya na 37 Celsius C maka otu izu ma na-ejigide ihe karịrị 90% ọrụ.
◮Nkọwa dị elu: Enzyme nwere ọrụ mmalite na-ekpo ọkụ dị elu.
◮Elu template adaptability: enwere ike iji mee ka ọ dị elu nke ọmaGCurunaụdị DNA dị iche iche siri ike ịbawanye.
◮Ikwesị ntụkwasị obi siri ike: Ikwesị ntụkwasị obi bụ ugboro 6of nkịtị Taq Enzyme.